Iindlela ezikhoyo ngoku kuyilo lwegraphic | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UJorge Neira | | Iimpawu, Imifanekiso, Izibonelelo
Kuye kwathiwa uyilo lwegraphic inxulumene ngokusondeleyo netekhnolojiKungenxa yoko le nto iingcali kweli candelo kufuneka zikhawuleze zilungelelanise iimfuno zomsebenzisi, iintsingiselo kunye nezinto ezithandayo.
Kule nqaku siza kubona ezinye zeendlela ezikhoyo ezikhoyo kuyilo lwegraphic, ke qaphela.
1 Iindlela ezi-XNUMX ezikhoyo ngoku kuyilo lwegraphic
1.1 Imifanekiso ejikeleze isikrini sonke
2 Iindidi zeefonti
2.1 Biza amaqhosha esenzo
2.2 Oopopayi notshintsho
2.3 Uyilo olusetyenziswe kwizixhobo eziphathwayo
2.4 Imizobo ye-SVG
3 Umzekelo, kuya kuba yinto eqhelekileyo ukujonga
3.1 Izicelo zeWebhu eziqhubekayo
3.2 Uyilo lwamathambo
Iindlela ezi-XNUMX ezikhoyo ngoku kuyilo lwegraphic
Imifanekiso ejikeleze isikrini sonke
Ngenxa yempembelelo yabo ephezulu, banjalo ezilungele ukufezekisa ingqaleloNokuba ushiya umyalezo, ukwazisa uphawu, ukwamkela iwebhusayithi, wonke umfanekiso onokuba lula kakhulu okanye uzele ziinkcukacha; ewe, ubukhali okanye inkcazo yale nto ibaluleke kakhulu.
ukuba ukulinganisa ukulula okukhoyo kuyilo lwegraphic namhlanje ngokubanzi kwaye ukusetyenziswa kwe-typography kuthatha indawo esembindini, yiyo loo nto ukhetho oluchanekileyo lwento enye lubalulekile, ekufuneka lubambe ngokwaneleyo ukuze kufezekiswe injongo yokuba Inokuba kukunika umyalezo okanye ukuba umsebenzisi aye ngqo kwiifowuni zokufowuna, esiza kuthetha ngokulandelayo.
Biza amaqhosha esenzo
Ezi zihamba kakhulu zihamba kunye Uyilo olwenziwe ngemifanekiso yesikrini esipheleleyo, Zilungele imeko encinci, zintle kwaye kwangaxeshanye zihlasela kwaye zifezekise injongo, ethi umsebenzisi azicofe kwaye afumane ulwazi oluthe kratya.
Bayi indlela yoqobo yokunxibelelana nomsebenzisi wewebhusayithiKubalulekile ukuba ungayigcwalisi ngezi zinto, endaweni yoko, ubuchule xa uzisebenzisa ukuze iziphumo zilindelwe, zibe nefuthe kwaye zikholise abo bazijongileyo.
Uyilo olusetyenziswe kwizixhobo eziphathwayo
Izixhobo eziphathwayo eziphathwayo zajika zaba sisixhobo somsebenzi, i-ajenda yobuqu, unxibelelwano kunye nemfuneko yemihla ngemihla yabo banayo; Ngenxa yoko, ukulungelelaniswa kwezi zixhobo ukuxhasa ukukhangela kwiwebhusayithi kukhokelele kwifayile ye- uyilo kunye nokuziqhelanisa nezi ndawo ukuze zihambelane kwaye ziyafumaneka kumsebenzisi naphi na apho akhoyo.
Kukho iinkampani ezithile ezineenguqulelo kwiiwebhusayithi zazo ezilungiselelwe izixhobo zeselfowuni.
Ibhekisa kwi ukuveliswa kwemifanekiso kwifomathi yedijithali Ukuqala kumanani ojiyometri ahlukeneyo azimeleyo, nanjengoko ahlukile kwimizobo eyenziwe ngeepikseli, avumela imifanekiso ukuba yandiswe ngaphandle kokuphulukana nomgangatho wayo okanye ubukhali, yiyo loo nto ngoku isetyenziswa ngokubanzi kwaye ngakumbi kwiilogo kwiiwebhusayithi kunye nemifanekiso elula kakhulu ebekwe kumaphepha asekhaya.
Okunye Iindlela zango-2017 Batsho ukuba uyilo lwegraphic luya kusebenza ngokukodwa ekuphuculeni nasekuhambeni kwizixhobo eziphathwayo, xa kuthathelwa ingqalelo inani labasebenzisi abakhangela iiwebhusayithi ngokukhethekileyo kwiimofowuni zabo.
Siza kubona ngoko, ukulungelelaniswa kweendawo ezikhoyo kunye noyilo olutsha olujolise kubasebenzisi besixhobo esiphathwayo.
Umzekelo, kuya kuba yinto eqhelekileyo ukujonga
Izicelo zeWebhu eziqhubekayo
Zichasene noko sikwaziyo namhlanje njengezicelo kwaye ezi ivela kwiVenkile yeVenkile kunye neVenkile yokudlala Kwaye kufuneka siyikhuphele ukuze sikwazi ukuzisebenzisa kwii-mobiles zethu, umahluko osisiseko kukuba Singazisebenzisa ezi PWAs ngokuthe ngqo kwisikhangeli ngaphandle kokuyikhuphela.
Inokufumaneka kwakhona kwiscreen sasekhaya nakwidesktop.
Uyilo lwewebhu ukuya phambili, iya kuphuhlisa ngokungathi zizicelo kwaye ngenxa yoko, abayili abaninzi baya kucela ukwenza izicelo zemveli ezivenkileni.
Ngokungafaniyo Abajikelezi, indlela yokulayisha iiwebhusayithi ngoku kumathambo, ibhekisa ekulayisheni ngokwamacandelo, ukusuka kwezona zilula ukuya kwezona zinto zinzima, kodwa ihlala inemvelaphi okanye amathambo escreen okhe wakhangela kuso. Ndiyabulela koku, umsebenzisi xa ejonga ifayile ye- ababambi bendawo ungalindela ukuba abo bezayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Iindlela ezikhoyo ngoku kuyilo lwegraphic
Iinkqubo kunye nezixhobo kuyilo lwegraphic